Ezigbo Ụdị Ịhụnanya - Atụmatụ Echiche Tattoos
Ezigbo Ụdị Ịhụnanya
sonitattoo March 11, 2017
1. Ụda ịhụnanya na ogwe aka dị ala na-eme ka nwa agbọghọ mara mma
Ụmụ nwanyị na-ahụ ịhụnanya mara mma na ịhụnanya nke ime ka ha dị mma
2. Ụdị ịhụnanya na mkpịsị onk nke nwa onya na-eme ka anya dị egwu
Ụmụ agbọghọ na-ahụ ịhụnanya a n'anya na mkpịsị nwa ink nke na-agbaji afọ ha iji mee ka ha yie anya na-adọrọ adọrọ
3. n'anya egbu egbu n'azụ ntị eme ka anya nwanyi
Ụmụ agbọghọ dị ka ima ima ima n'anya n'azụ ntị. Ejiji egbu egbu a mara mma.
4. n'anya egbu egbu n'olu maka nwa agbọghọ na-eji oji na-acha uhie uhie na-eme ka anya mara mma
Ụmụ nwanyị Brown na nwa ntutu isi ga-ahụ Ụdị ịhụnanya na ejiji oji na pink; egbu egbu egbu a na-acha ntutu na akpụkpọ ahụ iji mee ka ha yie ihe dị mma ma maa mma
5. Ụda ịhụnanya na ogwe aka dị ala na-eweta anya dị ịtụnanya
Ụmụ agbọghọ Brown ga-ahụ ihe ngosi onk nke nwa ojiji. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha dị ịtụnanya ma dị mma
6. n'anya egbu egbu n'akụkụ azụ na-eme ka ụmụ nwanyị mara mma ma mara mma
Ụdị ịhụnanya na-azụ n'akụkụ azụmaị ink nke ifuru na-eme ka ikpuru pụta ọmarịcha
7. n'anya egbu egbu n'ubu eme ka nwanyi yie anya
Ndị inyom na-eyiri uwe ojii na-enweghị aka n'anya hụrụ Ụdị ịhụnanya a na ejiji ink ojii; Ejiji egbu egbu a na-ejikọta elu ojii iji mee ka ha maa mma ma mara mma.
8. Na-eme Ka Ihunanya Chineke egbu egbu na ụkwụ iji mee ka ọ mara ya
Ụmụ agbọghọ na-eme ka egbugbu na-egbuke egbuke n'ụkwụ iji gosi ụkwụ ha ma mee ka ọ bụrụ ebe ha ga-adọrọ mmasị
9. n'anya egbu egbu na azụ azụ nke a na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha odo odo na-acha odo odo na-eme ka anya nwanyi
Ụmụ agbọghọ dịka ima egbu egbu na azụ azụ na -emepụta ink na-acha odo odo na edo edo. Ụdị egbu egbu a dị mma.
10. Ogbugbu ima na ejiji onk na-eme ka ha maa mma
Ụmụ nwanyị nwere akpụkpọ anụ na-acha aja aja ga-ahụ ezigbo mma ịhụnanya na mkpịsị aka ink. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha mara mma n'anya ọha.
11. Ụmụ agbọghọ na-aga maka ima imagbu na azụ aka ha iji mee ka ha mara mma.
Ụmụ agbọghọ ndị na-eyikwasị n'elu elu ga-ahụ n'anya maka igbu egbugbu na azụ aka ha iji mee ka ndị ọzọ mara ya ma nye ha anya mara mma.
12. n'anya egbu egbu na mkpịsị aka eme ka nwanyi yie anya
Ụmụ nwanyị Brown hụrụ ịhụnanya a n'anya na mkpịsị aka; egbu egbu egbu a na-eme ka ha mara mma ma dị mma
Tags:ima ima mma
arịlịka arịlịkaenyi kacha mma enyiegbu egbu ebighi ebiEgwu ugozodiac akara akaraechiche egbugbuegbu egbu mmiriima ima mmaọnwa tattoosna-adọ aka mmaegbu egbu egbudi na nwunyen'olu oluakara ntụpọọdụm ọdụmkoi ika tattooAnkle Tattoosegbugbu egbugbungwusi pusiagbụrụ ebomehndi imeweakwara obiGeometric Tattoosegwu egwuna-egbu egbuegbu egbu okpumma tattoosegbu egbu hennandị na-egbuke egbukeỤdị ekpomkpaegbugbu maka ụmụ agbọghọakpị akpịazụ azụudara okooko osisiaka mma akaokpueze okpuezennụnụUche obindị mmụọ ozirip tattoosegbu egbu osisi lotusegbu egbuegbu egbu diamondenyí egbu egbuụmụnne mgbuaka akaụkwụ akaNtuba ntughariaka akaegbu egbu maka ụmụ nwoke